करण चौधरी नाडामा हालसम्मकै कान्छा उपाध्यक्ष
काठमाण्डौ । सीजी मोटोकर्प तथा सीजी होल्डिङ्ग्सका कार्यकारी निर्देशक करण चौधरी नेपाल अटोमोबाइल डिलर एसोसिएसनको उपाध्यक्षमा चुनिएका छन् । नाडामा कार्यभार सम्हाल्नेमा करण चौधरी हालसम्मकै कान्छा उपाध्यक्ष हुन्। उनी नाडाको सवारी कमिटीका सभापतिमा समेत मनोनित भएका छन्। भर्खरै नाडाको अध्यक्षमा निर्वाचित कृष्णप्रसाद दुलालको...
एमजी ६ सिटे ‘हेक्टर प्लस’ ल्याउँदै, यस्ता छन् फिचर्स
काठमाण्डौ । एमजीले हेक्टर एसयूभीका साथ भारतीय अटोमोबाइल बजारमा धमाकेदार परफमेन्स गर्ने तयारीमा रहेको छ । कम्पनीको पहिलो कार भारतमा निकै लोकप्रिय थियो । अब कम्पनी यो कार ६ सिटे भर्जनमा लन्च गर्ने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनी अटो एक्सपोमा ६ सिटे एमजी हेक्टर लन्च गर्ने तयारीमा छ । हेक्टरको ६ सिटे भर्जनको एमजी हेक्टर प्लस नाम दिइएको छ । एमजी...
रोयल इनफिल्ड लन्च गर्दै महिलाविशेष बाइक, यस्ता छन् फिचर्स
काठमाण्डौ । पुुरुषका लागि मोडर्न क्लासिक बाइकको उत्पादक कम्पनी रोयल इनफिल्डले अब महिलाहरुलाई लक्षित गर्दै विशेष बाइक ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । कम्पनीले सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकमा एउटा नयाँ स्लिम र हलुुका मोटरसाइकल लन्च गर्ने तयारी गरेको हो । कम्पनीका अनुुसार यो बाइक रोडस्टर स्टाइलको हुुनेछ भने यसलाई खासगरी महिलाहरुलाई ध्यानमा...
काठमाण्डौमा ‘बाइक रेसिङ’, तीन क्याटागोरीमा राइडरहरुबीच प्रतिस्पर्धा
काठमाण्डौ । आउँदो शनिबार काठमाण्डौको गुर्जुधारास्थित भेइकल एकेडेमी एन्ड रिसर्च सेन्टरमा बाइक रेसिङ प्रतियोगिता ‘टीभीएस रेसिङ’ हुने भएको छ । नेपाल रोड रेसिङ च्याम्पियनसिप २०१९ नामक प्रतियोगिताको मुख्य प्रायोजक नेपालमा टीभीएस बाइक तथा स्कुटरको आधिकारिक वितरक जगदम्बा मोटर्स रहेको छ । मोटर स्पोर्ट्स नेपालले आयोजना गर्न लागेको यो...
विदेशमा पढेर/सिकेर आएका युवाले गरे कमाल, निर्माण भो देशकै पहिलो शानदार मोटरसाइकल
काठमाण्डौ । नेपालीहरुको आफ्नै इञ्जिनियरिङ, डिजाइनमा सवारी साधन निर्माण संभव छ ? धेरैको प्रतिप्रश्न हुनसक्छ–तत्काल संभव होला र ? तर, विदेशबाट पढेर र सीप सिकेर आएका युवाहरुले तत्काल संभव नदेखिने यस्तै काम गरेर देखाइदिएका छन् । नेपाली इञ्जिनियरहरुको टिम नेपालमै इलेक्ट्रिक मोटरसाइकल निर्माण गर्न सफल भएको छ । त्यो पनि विदेशी �...
मारुती सुजुकीको ‘अल्टो भीएक्स प्लस’ कार लन्च, यस्ता छन् फिचर्स
काठमाण्डौ । भारतको सबैभन्दा ठूलो कार निर्माता कम्पनी मारुती सुजुकीले आज बिहीबार आफ्नो नयाँ ‘अल्टो भीएक्स प्लस’ कार भातरको नयाँदिल्लीमा लन्च गरेको छ । यो नयाँ अल्टो कारमा बीएस सिक्स इन्जि दिइएको छ । जसले २२.०३ किलामिटेर प्रतिलिटर माइलेज दिनेछ । कारको सुरुआत मूल्य भारु ३.८० लाख तोकिएको छ । नयाँ अल्टो पहिलाको तुलनामा युनिक डिजाइनका साथ...
‘केटीएम–३९० एड्भेन्चर’ बाइकको बुकिङ सुरु, लन्च भने जनवरीमा
काठमाण्डौ । बहुप्रतिक्षित ‘केटीएम–३९० एड्भेन्चर’ बाइक लन्च हुनुअगावै बुकिङ सुरु गरिएको छ । सन् २०२० को जनवरीमा लन्च हुुने यो बाइकको डिलरमा यसको अनौपचारिक बुकिङ सुरु भइसकेको छ । यसको औपचारिक बुकिङ भने एक सातापछि मात्रै हुनेछ । यो बाइक पहिलोपटक ईआरसीएमए २०१९ को मोटरसाइकल सोमा प्रर्दशन गरिएको थियो । यो बाइक ३९० ड्युकमा आधारित छ ।...
समस्या देखिएपछि यामाहाले बजारबाट फिर्ता माग्यो आफ्नो बाइक
काठमाण्डौ । यामाहा कम्पनीले आफ्नो चर्चित यामाहा एफजेड एफआई र यामाहा एफजेड एसएफआईका ७ हजार ७५७ वटा बाइक बजारबाट फिर्ता मगाएको छ । ती बाइकको रियर साइड रिफ्लेक्टरमा समस्या आएपछि कम्पनीले बाइक फिर्ता मगाउने निर्णय गरेको हो । कम्पनीले बाइक फिर्ता गर्न पनि सकिने वा देखिएको समस्या निःशुल्क समाधान गर्ने पनि जनाएको छ । प्रभावित ७ हजार ७५७ बाइक...
फोर्डका गाडी निर्माणमा फालिएका प्लास्टिकका बोतल प्रयोग
काठमाण्डौ । चर्चित मोटर निर्माता कम्पनी फोर्डले गाडी निर्माण गर्ने क्रममा फालिएका प्लास्टिकको बोतलहरु प्रयोग गरिरहेको छ भन्दा अचम्म लाग्न सक्छ । तर वास्तविकता यही हो । कम्पनीले गाडी निर्माणका क्रममा अन्डरबडी शिल्ड बनाउन प्लास्टिक प्रयोग गर्छ । अन्य प्रकारको प्लास्टिक प्रयोग गर्नुको साटो कम्पनीले हरेक वर्ष फालिएका प्लास्टिकका बोतल...
कारभित्र ‘एअर फ्रेसनर’ प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुहोस्, नत्र विस्फोट होला !
काठमाण्डौ । यदि तपाइँ आफ्नो कारमा ‘एअर फ्रेसनर’ को प्रयोग गर्नुहुन्छ भने सावधान रहनुहोस् । असावधानीपूर्वक प्रयोगमा ल्याइएको एअर फ्रेसनरले तपाइँको कारमा विस्फोट पनि हुन सक्छ । बेलायतको वेस्ट यर्कसायरको ह्यालिफ्याक्स सहरमा हालै यस्तै एउटा घटनाले आफ्ना कारमा एअर फ्रेसनर प्रयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुपर्नेमा जोड दिइएको हो...
नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसनका अध्यक्षमा दुलाल निर्विरोध निर्वाचित
काठमाण्डौ। अटोमोबाइल व्यवसायीहरुको छाता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालको अध्यक्षमा कृष्णप्रसाद दुलाल निर्विरोध निर्वाचित भएका छन्। सवारी तथा सवारीजन्यहरुको बिक्रेता संस्था नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपालले आगामी नेतृत्व चयनका लागि आइतबार मनोनयन दर्ता गर्ने दिन तोकिएको थियो। मनोनयन दर्ताकै क्रममा सर्वसम्मति भएपछि...
काठमाण्डौ । स्विफ्ट ह्याचब्याक कार सुजुकीको ग्लोबल प्रडक्ट हो । जुन निकै लोकप्रिय छ । नेपाल र भारतमा यो कार निकै मन पराइएको छ । अब सुजुकीले थाइल्यानडमा जारी इन्टरनेसनल मोटर एक्सपोमा स्विफ्ट एक्सट्रिम नाममा एउटा कन्सेप्ट कार पेस गर्न गइरहेको छ । यो कन्सेप्स कारमा स्ट्यार्डर्ड स्विफ्टको तुलनामा थुप्रै परिवर्तन गरिएको छ । जसले यो कारलाई...